Tartanka Waxqabadka Cusub ee Apple Watch oo u Dabaaldegaya Sannad-guuradii 100-aad ee Aasaaska Weyn | Wararka IPhone
Loolanka cusub ee Apple Watch wuxuu u tartamayaa u dabaaldegga sannad-guurada 100-aad ee kanaaska weyn
Apple Watch waa a qalab firfircoon taasina waxay kuu oggolaaneysaa inaad qabato hawlo tiro badan. Waa kormeer firfircoon oo weyn iyo dhiirrigeliye caafimaad maaddaama aan dejin karno digniinno nagu dhiirrigeliya jimicsiga, tusaale ahaan. Mararka qaar markaan helno wax aan kasbano way fududahay jimicsiga sidaas darteedna Apple wuxuu la qabaa fikirkiisa caqabadaha dhaqdhaqaaqa. Caqabadahaani waxay ku soo rogayaan ujeeddo adeegsadaha, haddii ay dhammaystiraan, ay awoodi doonaan inay helaan calaamado iyo walxo kala duwan oo loogu adeegsado barnaamijyada kala duwan. Munaasabaddan, caqabadda dhaqdhaqaaqa waxay la xiriirtaa 100 guuradii Grand Canyon, dooxada quraafaadka ah ee lagu xardhay Webiga Colorado ee Arizona.
Samee jimicsi in ka badan 4,8km si aad ugu guuleysato tartankan waxqabad
Grand Canyon of Colorado waxay u dabaaldegtaa iyada 100 sannad-guurada xiga August 25 oo Apple waxay rabtay inay diiwaangeliso a loolanka dhaqdhaqaaqa ee Apple Watch. Ujeedada caqabadan ayaa ah in la duubo orodka, socodka ama jimicsiga curyaamiinta masaafada wadada Grand Canyon ee masaafada ah 3 mayl ama u dhiganta kilomitir: 4,8.
Caqabadaha noocan ah ayaa dhiirigelin kale u ah dadka isticmaala inay helaan calaamado gaar ah oo kaliya laga heli karo caqabadahan caadada ah. Abaalmarinta dhammaystirka caqabadda ayaa ah calaamadaha gaarka ah ee barnaamijka Waxqabadka, oo lagu daray istiikarada firfircoon ee loogu talagalay farriimaha iyo barnaamijka FaceTime. Waxaa muhiim ah in la xasuusnaado in caqabaddu ay noqon doonto mid firfircoon August 25 oo waxay socon doontaa hal maalin sidaa darteed haddii aad rabto inaad hesho, la soco ama xusuusin ku qor jadwalkaaga!
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Loolanka cusub ee Apple Watch wuxuu u tartamayaa u dabaaldegga sannad-guurada 100-aad ee kanaaska weyn
Siri wuxuu ku garaacaa Alexa sirdoonka laakiin ma garaaco Kaaliyaha Google